DAAWO VIDEO: Wariye Ku Sugan Tukaraq oo Kawaramaya Xaalada – Marqaanmedia24.com
DAAWO VIDEO: Wariye Ku Sugan Tukaraq oo Kawaramaya Xaalada
May 16, 2018 maqal iyo muuqaal, wararka 6
DHAGAYSO DEG DEG:Ganacsatada Puntland oo Hub Ku tageeraya Ciidamada Tukaraq Shacabka Ugu baaqay Inaan Loo kala Hadhin
DAAWO VIDEO:Axmed Karaash Iyo Baashe maxamed farax oo Tukaraq labada dhinac ka Kala Jooga
Kuwa SNM-ta meelahan uga doodaya mala awaal iyo khayaal ay niyadda ku dhistaan uun bay iskaga hadaaqaan oo dar waaqiciga ka baxsan. Mid baa laga hayaa “taangi sidiisa loo qabsado caalamka ku ma aynaan maqlin ee taangi gubtay ayaa la qabtaa”. Taangi iyo beebee ba haddii ay kuwii saarnaa ka carareen waa laga qabsadaa sida caadiga ah ba. Maleeshiyadii SNM baa beebeegii ay saarnaayeen dhagac ka yidhi ayay afka u quudhi la’yihiin. Masaakiin!
Waxaa kale oo ay ku andacoonayaan qaar Dhulbahante iyo Warsangali u dhashay baa maleeshiyada SNM-ta ku jira oo Hartigooda weerarka ku haya. Dhowrkaa midh waa dhuuniqaateyaal awal ba daciifnimada iyo dulliga ba u dhashay oo Hartiga u ma tirsana. Khamriga, daroogada iyo qaadka durdurka ah ee maleeshiyada SNM-ta lagu maandooriyay ayay kuwaasu na dadnimadoodii ka door bideen. Maleeshiyo maandooriyeyaal lagu maareynayo waa dugaag la iska wad wato ee ma aha dad saaxi ah ee qaddiyad iyo nolol ba wax ka og.
Waxaa maraanmarsiinyo iyana laga dhiganayaa ciidanka qaranka Soomaaliya “ayaa la inoo adeegsaday”. Waa hadaaq aad loogu qoslo xaqiiqdii ee aan ka suurobi karin dad caadi ah ee uu caqligoodu shaqeynayo. Ciidamada Soomaaliya maleeshiyadan la maandooriyay ee masaakiinta ah iyaba in aanay ku qaldamaynin cid kasta oo saaxi ahi way dhaadsan tahay. “Somaliland” ma aha wax jira sida waafaqsan sharciyada iyo qawaaniinta caalamka iyo xeerarka iyo dastuurka federaalka ee Soomaaliya. Qabiil kuwa kale u dawladeyn karaa ma uu jiri karo ee duulka khayaalka ku nool ee wax aan jirin isku qanciyoow qarow maalmeedka ka toosa.
Xaarka isku xaji waxani cabaad wey dhaafeene. Jeclow ama ha jeclaan ilmaadeeradaa oo Somaliland oo ay illaa iyo dhuuxa saaqsan tahay ayaa nala safan. Aaminsana inay qadiyad dhab ah oo tiinan qabiilaysan ka weyn.
Kkkkkk Waa wax lagu qoslo marmarsiinyaha aad meeshan la marmaraysaan. Khamri uyo Daroogo ayaa lagu maan guuriyay. Kkkkk
Hadaad waxaas la shirtimid welli geeraarkii waakaa xidhan yahay.
Anigu MAsiibadaan magacyaha badan Mar horaan iska tiiriyay siidii looxdii malcaamadaha.kkkkkk waa kuu kalidaa ninkan Wali ku mashquulsan magacii uu soo qadan lahaa.is qurxin aan dhamaan magacyo tiro badan waxaanu ka niqiinay dumarka kani dumarkii xitaa waa uu dhaafay.Mr TANAG MA DHAN
Walaahi waa runtaa oo jirjiroolahan magacyada iyo midabada badan wax la iska tiiriyo ayuu istaahillaa. Anna waan iska tiirin imika wixii laga bilaabo for good.
Mida kale Ama igu arin baan ku qoslay in badan. Ma xasuusataa cishadii dhoweyd ee uu lahaa meeshan waan ka yara maqnaanayaa een ana markuu nacasnimo hadlay futada laad kaga dhufanayay? Kkkkk
Waxa maalin dabadeed meesha soo galay dad aynaan hore u arki jirin oo yacni raxrax leynaya. Diiqii ayaa meesha ka maqan. Ninkii meesha shidi jiray. Bujuubajaa iyo wax aynaan garanayn.
Dhowr maalmood dabadeedna kolkuu soo rogaal celiyay meeshaba waa laga waayay dadkii waanu kuu xiisnayda meeshan ka hayay. Kkkkkkk
Waa nin meeshan uun isku camira 24 7. Isla isagii uun baa magacyada noo soo kala badalanayay.
Walee waad la heshay kolkaad laheyd magacuu soo badalanayaa. Kkkkkkk
Kkkkk kkkkkk AHMADOOW
sida aan TANAG u aqaan shaqsi u yaqaan aad ayuu yar yahay.intii uu maqnaa adigaa moodaye wuxuu ku joogay magac YAXYE.KKKKK wuxuuna soo qoray.halkaan waxaa ka MAQAN QOODHKII SHIDI JIRAY walaahi waan gartay in uu isga yahay.lakiin waan ka xushooday marba hadii aan ogaaday in uu isga yahay…. ayaar ayaan is dhuubay.MA ogtahay MA fiicno in ninka raga ah Mar walbo lagu shito.lakiin waan ogaa yaxye in isaga yahay kkkkk xitaa maanta xili sii horaayday waxaa na soo galay kii kale ee dable ahaa isagoo magaca AYAAN wata waad ku qarxiday waana uu cararay..kk
Mar dhow oday kale ayaan naawilayaa in shaarka soo badasho kkkkkkkkklklk
Meesha si wanaagsan odayaashan u kala garataa nin yahow. Walee nin cajiib ah ayaad tahay.